Nyowani Belkin uye Incase Nylon uye Leather Tambo dzeApple Tarisa | Ndinobva mac
Vazhinji ndivo vagadziri vakaona kuti nyika yakatenderedza Apple Watch iri kuwedzera kukosha uye kuti kugadzira chishongedzo chayo kunotungamira mukuchengetedza kwakachengeteka. Ndozvakafungwa neaya mahofori maviri efoni nhare Belkin uye Incase vakazivisa kusvika kwemabhande maviri eApple Watch yakagadzirwa nenylon uye dehwe.
Aya ndiwo mabhande matsva ane dhizaini dhizaini uye zvinobudirira kwazvo zvigadzirwa izvo zvinoita kuti yako nyowani Apple Watch itaridzike. Tiri kutaura nezve tambo dzakagadzirwa nenylon uye dehwe.
Iyo Incase brand yakagadzira gumi nembiri tambo tambo dzakagadzirwa nenylon izvo zvinokutendera iwe kupfeka wachi nyowani nekukwanisa kushandura tambo kakawanda sezvaunoda. Yakafungidzirwa Apple Nylon Straps uye akavapa kubata kwayo kwakasarudzika. Iyo Belkin kambani yechikamu chayo yakatarisa kune akati wandei tambo mamodheru akagadzirwa echokwadi chaiwo dehwe.
Panyaya yemitengo, Incase tambo dzeyiloni dzinodhura kutenderera € 36, mutengo wakaderera zvishoma pane uya wakaiswa neApple pamabote ayo akagadzirwa nezvinhu zvakafanana. Belkin nhema, grey uye shava matehwe ematehwe, zvakadaro, vane mutengo we € 79,95 uye makambani ese ari maviri akafunga nezve ese ari 38 mm uye 42 mm mamodheru, saka chero wachi yako iwe unogona kuwana imwe yesarudzo idzi.
1 Belkin Bhandi
2 Incase Belt
Yakagadzirirwa kukwana matinji mazhinji.
Tsika yakagadzirirwa mesh buckle uye clasp.
3mm gobvu tambo.
Inowanikwa mune matatu mavara.
Mumasikisi maviri: yeiyo 38mm Apple Watch uye iyo 42mm Apple Watch.
Kugarisana: Apple Tarisa 42mm Series 1 uye 2.
Chinyorwa: Yakareruka uye yakasimba dete nylon.
Details: Stainless simbi bhakoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matsva ematehwe uye nylon mabhendi kubva kuBelkin uye Incase yeApple Watch
IMac neMac mini chete (muna 2014) zvakaburitswa munaGumiguru